Sida loo Beddelaan QuickTime MOV si Jabbuuti ku Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan QuickTime MOV in ay Jabbuuti ku Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
Jabbuuti loola jeedaa animation abuuray Adobe Flash. Waxaa ku jiri kara qoraalka iyo sidoo kale dulinka iyo raster labada naqshadeynta, iyo sidoo kale waxaa ka mid ah falalka is-dhexgal ku qoran ActionScript. Waxaa ciyaara ee daalacashada Web in ay leeyihiin fur-in Flash ku rakiban. Haddii aad qabto wax badan oo QuickTime (MOV) videos, aad u bedeli karaan faylasha kuwaas oo MOV in file Jabbuuti oo loogu talagalay loo maqli karo ciyaaryahanka flash ama wadaagaan on websites.
Si loogu badalo QuickTime MOV video inay Jabbuuti oo video, Video Converter for Windows (Windows 10 ka mid ah) iyo Video Converter u Mac (Mountain Libaaxa, Libaaxa ka mid ahaa) waxaad badbaadin lahaa wax badan oo ay la xawaaraha diinta si degdeg ah oo qaab ciyaareed joogta ah. Maqaalkani waxa uu ku barayaa sida loo badalo QuickTime MOV video in ay Jabbuuti video in Windows isticmaalaya talaabo talaabo Video Converter.
Qaybta 1aad: Sida loo Beddelaan QuickTime MOV si Jabbuuti ee Windows OS (Windows 8 taageeray)
Tallaabo 1: Ku dar files MOV
Si aad ku dari files, kaliya aad u jiidi kartaa video ka fayl file aad liiska suuqa kala hawlgala ee MOV ee barnaamijka Jabbuuti, ama guji "Add Files" icon, si ay u doortaan MOV aad rabto in aad si loogu badalo. Waxaad dajiyaan karaa in ka badan hal MOV files galay software ah ee diinta halka function diinta Dufcaddii waxaa la siiyaa.
Talaabada 2: Calan qaab wax soo saarka
Riix ah "Qaabka Output" button, taas oo horseedaysa ah "Qaabka Output" window. Halkan, waxaad dooran "Jabbuuti" sida qaab wax soo saarka aad ka "qaab"> "Web".
Talooyin: Tani MOV in ay Jabbuuti oo Converter sidoo kale u saamaxaaya in ay xaalkaa video ka hor inta qaab beddelidda. Waxaad dooran kartaa video ah oo ka mid ah liiska faylka, guji "edit" menu, ama guji "Edit video" button. Markaasay aad u tayadoodii kartaa video by abuurka, beddelo video saamayn, iwm
Tallaabo 3: Ka billow si loogu badalo QuickTime MOV video in ay Jabbuuti video
Guji "Beddelaan" si aad u bilowdaan video diinta qaab QuickTime MOV in qaab Jabbuuti. Oo taas dabadeedna waxaad riixi kartaa "Open Folder" si loo ogaado meesha files wax soo saarka ayaa la badbaadiyey.
Talooyin: Dhab ahaantii, MOV si Jabbuuti Video Converter (Windows 8 taageeray) ayaa sidoo kale u bedeli karaan video dhexeeya dhammaan noocyada kala duwan ee ah qaabab kale, xataa qaab ay ku jiraan oo ay taageerayaan ku iPad / iPod / iPhone, iwm
Qeybta 2: Sida loo Beddelaan MOV video in video Jabbuuti ee Mac OS
Haddii aad u qeybiso badalo clips MOV aad ee Mac (Mountain Libaaxa, Libaaxa ka mid ah), oo aad qaadi karto tallaabooyinka la mid isku wada mid ah ama u tag User Guide of Video Converter u Mac aad u hesho macluumaad faahfaahsan:
Daah-video Mac MOV si Jabbuuti video Converter u Mac;
Files MOV Import galay app Mac oo ay si toos ah u soo jiiday, oo iyaga u tiiri si Converter ah;
Guji "Beddelaan" si loogu badalo files MOV in files Jabbuuti. Waxaad dhab ahaan u baahan tahay in aan ka samayn, laakiin kaliya riix badhanka bilaawga ee inta kale ee hawsha Mac waxaa si otomaatik ah dhammeeyo by MOV ay billaabeen in ay Jabbuuti Video Converter u Mac (Mountain libaax oo taageeray).